umbuzo MIG 31 Firefox
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #449 by Dariussssss
Ngaba umntu akwazi ukufumana apho le ntaka amangalisayo FSX?
Ndiyayazi ukuba akukho esinye apha kodwa FS2004 kuphela.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: GODFREYE
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #455 by Gh0stRider203
ngaphandle kuqala, ukuba akukho njengokona MIG 31 lol oko intaka etsomo.
Okwesibini, incwadi Great kunye imovie!
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #456 by Dariussssss
Ndiyayazi lo nto.
Mateyu imovie buthuntu ... ngathi buthuntu ngokwenene. Ithemba le ncwadi ngcono.
Kwafuneka ukuba -31, kodwa ndandifuna ukufumana lo mntu, kodwa FSX.
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #458 by Gh0stRider203
thinkinrussian.blogspot.com/p/kulanda-flightsim-model.html zama oko
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #459 by Dariussssss
Khangela ukuba ndawo. Umntu olikhoboka lotywala kakhulu loo movie umntu ... lol
iinyanga 4 4 kwiiveki ezidlulileyo #1210 by FlankerAtRicoo
Ndiyifumene le ntaka:
Ixesha ukwenza page: 1.505 imizuzwana